गोपालमान र विमलेन्द्रले देउवाको विकल्प खोजिसक्नुभयो, कार्यकर्ता पनि विकल्प चाहन्छन्ः महेश आचार्य - केन्द्र खबर
गोपालमान र विमलेन्द्रले देउवाको विकल्प खोजिसक्नुभयो, कार्यकर्ता पनि विकल्प चाहन्छन्ः महेश आचार्य
२०७८ मंसिर २१ १४:५२
नेपाली कांग्रेसका नेता महेश आचार्यले पार्टीलाई शेरबहादुर देउवाको भन्दा बढी क्षमता चाहिएको आत्मसात सबैले गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
आचार्यले भने, “प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाजीको भूमिका र योगदानमा हामी विमति नराखौंला । तर पार्टीलाई देउवाजीको भन्दा बढी क्षमता चाहिन्छ भनेर नै उहाँकै समूहका विमलेन्द्र निधि र गोपालमान श्रेष्ठले विकल्प खोजिरहनुभएको छ ।
संस्थापन इतरका रामचन्द्र पौडेल, डा. शेखर कोइराला, डा. शशांक कोइराला र प्रकाशमान सिंहले पनि वैकल्पिक सोच राखिरहनुभएको छ ।”
गठबन्धन सरकार जोगाउन पनि पार्टीलाई देउवाको नेतृत्व चाहिएको भन्न नमिल्ने उनले बताए । आचार्यले थपे, “यो एकखाले असहज गठबन्धन भएको छ । यसले जनताले चाहेको परिणाम दिन पनि सक्दैन ।
यो गठबन्धन व्यक्तिका कारण सम्भव भएको हो या नेपाली कांग्रेसको भूमिका कारण निकास खोजिएको हो ? त्यसैले हामीले कुनै व्यक्तिको अपरिहार्यताका बारेमा नसोचौं । पार्टी व्यक्ति केन्द्रित भयो भने दुर्घटनाग्रस्त हुन्छ । असहज गठबन्धन भएको छ । जनताले चाहेको परिणाम दिन सक्दैन ।”
गुटबन्दीको धमिराले पार्टीको संगठनलाई छियाछिया पारेको नेता आचार्यले बताए । उनले भने, “एउटै व्यक्ति धेरै समय एउटै पदमा बसिरहँदा जटिल र कठोर अवस्था बन्दो रहेछ । गुटबन्दी बढ्यो । गुटको बन्दी हुनु भनेको दासता हो । सक्षम र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन छाड्यो । पारदर्शी र खुला छलफल हुन छाड्यो । पदाधिकारीको तहको साँघुरो छलफलमा सीमित भयो । पाँच हजार साथीहरुबीचमा यसबारे बहस भएन भने ७२, ७३ वर्षे इतिहास बोकेको नेपाली कांग्रेसको मात्र होइन राष्ट्रिय अस्मिता र लोकतन्त्रको भविष्य संकटमा पर्न सक्छ ।”
पार्टीभित्र विधि, पद्धतिको स्थापना र सहिष्णुताका निम्ति आफूले उपसभापति पदमा उम्मेदवारी दिन लागेको आचार्यले बताए । उनले थपे, “यहाँ महाधिवेशनलाई साँघुरो अर्थमा बुझिएको छ । महाधिवेशन भनेको एउटा गुटले अर्को गुटलाई विस्थापित गर्नु होइन, पद, पैसा र शक्तिको बलमा नेतृत्वमा पुग्ने होडबाजी पनि होइन ।
पार्टीभित्र अहिले परिवर्तनका निम्ति एक प्रकारको व्यग्रता र छटपटी छ । त्यही परिवर्तनको चेष्टास्वरुप मैले उपसभापति पदमा उम्मेदवारी दिने विचार गरेको हुँ ।”
आचार्यले भने, “आफू साझा उम्मेदवार बन्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने कुरामा म त्यति चिन्तित छैन । यत्ति हो, कांग्रेस लोकतन्त्रको पाठशाला बन्नुपर्छ, सबैलाई जोड्ने पार्टी बन्नुपर्छ । म पार्टीमा नयाँ सोच, नयाँ ऊर्जा र नयाँ प्राण भर्न चाहन्छु ।
लोकतन्त्रलाई सहिष्णुताको पद्धतिको रुपमा विकसित गर्न चाहन्छु । म तमाम साथीहरुको मनमा एउटा आगो प्रज्ज्वलित गर्न चाहन्छु । मलाई व्यक्तिगत हार र जितभन्दा पनि सामूहिक विवेकमा भरोसा छ ।”
रिपोर्टस् नेपाल डटकमबाट